Multi-Point Electric Lubrication Pump | Multi-Line Electric Lubrication Paompy
Home/Paompy elektrika famenosana herinaratra/Ny DDB-XE dia manosotra mandeha ho azy paompy fanosotra elektrika marobe, 1 ~ 36 teboka ho an'ny safidy
Ny DDB-XE dia manosotra mandeha ho azy paompy fanosotra elektrika marobe, 1 ~ 36 teboka ho an'ny safidy
Product: DDB-XE Soso-kevitra Multi Point Electric Lubrication Pump
1. Max. miasa hatramin'ny 25 Mpa
2.0~36 teboka maromaro ho an'ny safidy
3. Fametrahana mandeha ho azy ny fotoana amin'ny fijanonana, ny fanombohana ary ny fanamafisam-peo amin'ny fanaraha-maso ny fanosotra
Ny DDB-XE Grease multi point electric lubrication paompy dia misy fitaovana mini. rafitra solosaina, ny vanim-potoana famatsiana solika mifandraika, fe-potoana fijanonana, toe-javatra tsy misy dikany, ny fananganana ny habetsahan'ny sakafo ara-dalàna, ny fihodinan'ny menaka mandeha ho azy mba hiantohana ny fiasan'ny lubrication mahazatra, ary ny fampihenana ny fanjifana solika, ny fitehirizana herinaratra sy ny angovo, Ny fahombiazan'ny DDB- XE grease multi point electric lubrication paompy dia tena azo itokisana, mety ho an'ny metallurgical milina, simenitra milina, fingotra sy plastika milina, conveyor milina, vibration fitaovana sy ny entona lafaoro sy ny lubrication rafitra sy ny lubrication fitaovana.
Fampiasana ny DDB-XE Soso-kevitra Multi Point Electric Lubrication Pump
Ahoana no hanakatona ny injector sasany:
Alefaso ny motera ary ajanony ny motera rehefa mihodina mankany amin'ny ilany mifanohitra amin'ny tsindrona akaiky ny mpikosoka solika ao anaty tanky. Esory ity tsindrona ity, esory ny lohataona, ny tadin'ny piston ary ny tanany piston, avy eo dia ampiasao ny hook mba hahazoana ilay tanany piston lehibe, ampidiro eo amboniny ny lavaka fanatsatsoana menaka ary ahodina 180°, dia apetraho ny tanany sy ny piston ary ny lohataona. avereno indray ary henjana ny injector.
Ahoana no hamahana ny olana raha tsy misy menaka na menaka mivoaka:
Rehefa tsy misy menaka na menaka mivoaka ny injector ny DDB-XE grease multi point electric lubrication paompy, dia mety ho vokatry ny rivotra ao amin'ny piston ary mijanona ny menaka na menaka mivoaka.
Avy eo dia mihodina ny scraper ao anaty fitoeran-tsolika mankany amin'ny toerana mifanohitra amin'ny injector tsy miasa, ary atsaharo ny motera. Esory ny tsindrona tsy miasa, anisan'izany ny lohataona sy ny piston rod, ary ny menaka dia alaina avy amin'ny fitoeran-tsolika miaraka amin'ny fanondro. Tsindrio ny menaka ao amin'ny lavaka fivoahana solika ambany ary terena hiditra ao amin'ny lavaka piston ny menaka mba hamoahana ny rivotra, sy ny sisa. Avereno in-5-6 ny fandidiana mba hanesorana ny rivotra ao amin'ny lavaka fanosehana piston. Avy eo, aorian'ny fametrahana ny loharano nesorina sy ny tadin'ny piston kely, dia henjana ny tsindrona menaka ary manomboka ny motera. Raha ara-dalàna ny menaka sy ny tsindry dia esorina ny lesoka.
Kaody famandrihana ny DDB-XE Multi-Point Electric Lubrication Pump
(1) mpamokatra = Indostria Hudsun
(3) Series = Andiany XE (DDB-X Miaraka amin'ny Fifehezana Solosaina Mikro)
(4) Lube Point Nos. = 1~ 36 ho an'ny safidy
DDB-XE Multi-Point Electric Lubrication Pump Data Teknika
modely Outlets No. Max. tsindry Tselatra moto Motor Power Tank Volume Weight
DDB-XE1~36 1 ~ 36 25Mpa 380V 0.35 ~ 0.55kw 8-30L 50 ~ 80Kg
HS-XE Digital Display Cycle Timer Feature
HS-XE nomerika fampisehoana tsingerin'ny fameram-potoana dia mampiasa vaovao tokana-chip circuit, roa napetraka ny laharana nomeraon-telefaonina switch izay afaka arbitrarily mametraka ny sandan'ny fotoana fe-potoana roa (TA Value, TB Value), mety ho an'ny roa lubrication fitaovana miasa cyclically na iray. fanodinkodinana fitaovana tsingerina misesisesy. Ny fampiharana an'ity fameram-pamokarana fampisehoana nomerika ity dia afaka mahatsapa ny fanaraha-maso mandeha ho azy amin'ny fitaovana elektrika anao, manatsara ny fahatokisana ny fiasan'ny fitaovana fanosotra ary mampitombo ny tombony ara-toekarena.
Izy io no safidy tsara indrindra ho an'ny fanaraha-maso ny fitaovana fanosotra elektrika.
Data ara-teknika lehibe:
– Vola miditra ~ 220VAC ; ~ 380VAC tsy voatery
– Hery ≤3VA
- Ampiasao ny tontolo iainana:
1. Ambient mari-pana: -10 °C - +40 °C.
2. Ny haavony dia ≤2000M.
3. Tsy misy fihovitrovitra lehibe sy fanafihan'ny orana sy ny lanezy.
4. Tsy misy metaly manimba, manimba ny entona sy ny vovoka.
- Fametrahana fotoana:
Time Code Sarany ora Hatramin'ny ora
0.1S 0.1 Faharoa 0.1s ~ 99.9s
S 1 Faharoa 1s ~ 999s
H 1 ora 1h ~ 999h
Fampifandraisana tariby elektrika amin'ny HS-XE Digital Display Cycle Timer
DDB-XE Lubrication paompy fametrahana refy
[email voaaro]2021-11-17T21: 58: 21 + 00: 00